Manchester United oo loo sheegay qiimaha ay si joogto ah ugula wareegi karto Odion Ighalo – Gool FM
(Manchester) 15 Mar 2020. Kooxda Manchester United ayaa lagu soo waramayaa in loo sheegay qiimaha ay ku heli karto adeegga xiddiga amaahda kula jooga ee Odion Ighalo, waana lacag dhan 15 milyan oo gini hadii ay doonayaan inay si joogto ah ula soo wareegaan weeraryahanka hadda deynta kula jooga kooxda.
30-sano jirkan ayaa kooxda Ole Gunnar Solskjaer u saxiixay bishii Janaayo heshiis lix bilood oo amaah ah oo uu kaga yimid kooxda Shanghai Shenhua, waxaana uu weeraryahanku diiwaan galiyay afar gool siddeedii kulan ee ugu horreysay tartammada oo dhan.
Solskjaer ayaa durbadiiba ka dhawaajiyay inuu heshiis joogto ah la gaari doono xiddiga reer Nigeria, sida laga soo xigtay Jariiradda The Mirror, waxayna Miiska saari doonaan lacag dhan 15 milyan oo gini si ay u helan weeraryahankii hore kooxda Watford.
Warbixinta ayaa sidoo kale sheeganaysa in Red Devils ay doonaysay inay aragto sida wanaagsan ee uu weeraryahanku ugu guuleysto Premier League ka hor inta uusan ka fiirsanin dalab joogto ah, laakiin Ighalo ayaa durbaba caan ka noqday garoonka Old Trafford inta lagu guda jiro muddadiisa gaaban ee uu joogo.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Nigeria ayaa dhaliyay 39 gool 99 kulan oo uu u saftay Watford ka hor inta uusan ugu dhaqaaqin Changchun Yatai sanadkii 2017-kii adduun dhan 21 milyan oo gini.
Qandaraaska haatan Ighalo ee kooxda Shanghai waxa uu ku eg yahay sanadka 2021-ka.